यस्ता पनि पत्रकार, पत्रकारीताको नाममा के के हुने रैछ ? (भिडियो हेर्नुस्) – Classic Khabar
सबै क्षेत्रमा केही नराम्रा ब्यक्ति हुन्छन् । जसले त्यो क्षेत्रलाई नै ब द नाम गराउँछन् । त्यस्तै पत्रकारीकतामा पनि केही त्यस्ता प्रवृत्ति छन् जसले समाजमा पत्रकारीता प्रति गलत दृष्टिकोण सिर्जना गरेका छन् । कञ्चनपुरवाट एउटा त्यस्तै भिडियो सार्वजनिक भएको छ । आफुलाई पत्रकार हुँ भन्दै गएका दुई जनाले मोवाइल केयर सेन्टरवाट २५ हजार रुपैया लिएको देखिन्छ ।
उनीहरु यो पसल दर्ता छ की छैन ? भन्दै सोधखोज गर्न पुगेका थिए । त्यसैको बहानामा ब्यापारीलाई डराएर उनीहरुले २५ हजार रुपैया लिएको थाहा भएको हो । उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नाइस टेलिभिजका रिपोर्टर वताउने गोबिन्द बिसी र सन्तोष भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरुले महेन्द्रनगरको साई मोवाईल केयरका सञ्चालक अवदेश श्रीवास्तवलाई डराएर उनीहरुले २५ हजार रुपैया लिएका थिए । प्रहरीले सीसीटीभी क्यामेरामा पनि सो भिडियो देखिएको जनाएको छ । उनीहरुले मोवाईल ग्यालरीबाट पैसा नदिएरै दुई ओटा पावर बैंक समेत लगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘व्यापारीले त्यसको गुनासो प्रहरीलाई गरेपछि उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । पसल दर्ता भए(नभएको छानबिन गर्न आएको भन्दै उनीहरुले पैसा मागेको प्रहरीले जनाएको छ । भिडियो नेपाल प्रेसले सार्वजनिक गरेको छ ।
Prevसंखुवासभा हत्या काण्ड पेचिलो बन्दै, कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ? यसो भन्छ प्रहरी
Nextतीजको दिन भद्रकालीमा धर्ती माताले देखाइन यस्तो अचम्मको शक्ती, माताको खतरनाक रुपले सबै भक्तहरु डराएर भागाभाग हेर्नुस